Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Eoropa farany ho an'ireo vao manomboka | Save A Train
Home > Travel Europe > Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Eoropa farany ho an'ireo vao manomboka
Na iza na iza eto avy any ivelan'i Eropa? Atsangano ny tananao ianao, raha araka ny mivaralila ny fitateram-bahoaka tahaka ahy. Azo antoka, New York manana metro, ary i Toronto dia mihodina ny metro, fa amin'ny alàlan'ny lehibe, mivezivezy amin'ny fiara izao tontolo izao. Isaky ny mahita ny tenantsika hanao ny hop izahay manerana ny dobo ho raitra frantsay baguette, afaka mahazo zavatra kely dia feno. Marina indrindra izany; voaloham-timers, izay matetika no tsy hevitra tsara ny fomba fitantanana ny Eoropa diany lamasinina, mainka izay tokony hizorany.
Na izany ny fahasamihafana eo amin'ny Eurostar sy Tambajotra fiaran-dalamby TGV (Torana a Gsisin'ny Vitesse) na manandrana mivezivezy famandrihana seza ary ny tapakila mivoatra, dia mety ho kely daholo be. Ho an'ireo araka ny very tahaka ahy, izahay efa tafangona ny tsara indrindra faritany haleha izy ny hanome anareo ny Ultimate Europe Trip lamasinina ho an'ny beginners.
Rail Fitaterana NO Eco-Friendly Way To Travel. Thny lahatsoratra voasoratra mba hampianatra momba Train Travel ny Save A Train, Taratasy fiaran-dalamby mora indrindra Tranonkala eto amin'izao tontolo izao.
Eran-tany fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Europe 1: London
Misy maromaro ny antony efa nifidy London ho voalohany eo amin'ity dia ity fijanonana, fa amin'ny ankapobeny fotsiny mahatonga ny tena dikany. Avy Amerika avaratra flights to London dia matetika sy mora vidy, izay midika fa mitady vola matotra ianao amin'ny fisidina eo amin'ny Frankfurt na ny eoropeana hafa.
London Hub dia lehibe ary ianao tsy olana mahita zavatra atao. Raha mpankafy Harry Potter ianao, ny tanàna dia rendriky ny boky sy ny sarimihetsika tsoratra. Raha miditra amin'ny teatra ianao, Soho no fonenana lehibe indrindra amin'ny fialamboly Broadway, ary afaka mahita matetika tapakila amin'ny fihenam-bidy.
Afaka mandany herinandro mora foana eto nefa tsy mandreraka asa atao, fa amin'ny kely indrindra, manasa efatra andro izahay. Rehefa vonona hifindra amin'ny, tonga ny fotoana ny loha tsy mahazo manao amin'ny manaraka toerana halehany.
Fijanonan'ny lamasinina 2: Paris
Tsy afaka mamely an'i Eropa ianao raha tsy mandany fotoana Romana indrindra tanàna. The City fanazavana dia tsy maintsy-stop, na ny voalohany na ny fahafolo fitsidihana, ary Soa ihany ho an'ny mpanao dia lavitra, ny Eurostar fiaran-dalamby mitantana saika ora rehetra avy any London ho any Paris. Ny dia maka mahery kely 2 ora sy tapakila fiaran-dalamby azo amidy mora vidy mialoha.
Dia mampiseho mandany, fara fahakeliny, efatra andro koa eto, fa raha toa fotoana fialan-tsasatrao voafetra dia azonao atao ny manosika azy roa.
Eran-tany fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Europe 3: Barcelona
Na dia mijanona manaraka ity dia tena dia lavitra tamin'ny lamasinina, dia afaka manararaotra ny natory fiara hisintona ny fahatongavanao alohan'ny hahatongavany amin'ity tanàna amoron-tsiraka ity. Mialà manodidina ny Gothic Quarter ary ankafizo ny chulos vita amin'ny sôkôla alohan'ny hiaingany any Parc Guell.
Ny iray amin'ireo lafiny tsara indrindra ao Barcelona dia ny tena lafo be i Espaina raha oharina amin'ireo mpifanolo-bodirindrina aminy avaratra, noho izany dia hahazo be ho anao ianao vola eto. Dia mampiseho mijanona roa andro, fara fahakeliny, mba hijery ny eto an-tanàna.
Mijanòna 4: Nice Ville
Malaza noho ny boardwalk sy tena akaikin'ny Cannes, Nice Ville dia fijanonana tsara amin'ny dia an-dalamben'i Europe. Raha ny tanàna mihitsy dia tsy toy ny lehibe tahaka ny renivohitr'i Frantsa, ny toerana akaiky mendrika maro andro fitsangatsanganana. voalohany, loha tsy mahazo manao Monaco kanefa very dimy dolara tao amin'ny Casino. Ankafizo ny fiara raitra sy manaraka ny Formula 1 lalana amin'ny izao tontolo izao-malaza hazakazaka lalana. Manaraka, mitondra lamasinina any Cannes – raha toa ianao teo foana nandritra ny fety maso ho an'ny olo-malaza lehibe!
Manoro hevitra farafahakeliny efatra izahay manaova toerana ho an'ny dia rehetra.
Eran-tany fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Europe 5: Roma
Italiana renivohitra dia andro firavoravoana ho an'ny maso. Avy amin'ny Espaniola Dingana ho any amin'ny Dobo Trevi, tsy ho aiza na aiza ianao tsy ho voaroan'ny mahatalanjona trano. Raha izay tsy ampy, ny sakafo mendrika slavering ny. Tanana paty gelato vies amin'ny vaovao sy ny ombidia mozzarella tonga mivantana avy amin'ny toeram-pambolena.
Tsy misy diso loatra fotoana handaniana any Roma, fa raha tsy maintsy handao hanaovanao azy araka farafahakeliny dimy andro.
Mijanòna 6: Venice
Ho ankilabao aho raha tsy nilaza Venise nandritra ny diany voalohany. Raha mbola tsy manana traikefa tsara indrindra (be loatra mpizaha tany), ity tanàna ity dia tsy maintsy ve. Eo anelanelan'ny gondolas sy ny lakana vahoaka, hahita ny lalanao mankany amin'ny sasany amin'ireo tranonkala be mpitia indrindra any Eoropa ianao.
Tsy fahazoan-dalana mandany andro indroa farafahakeliny any Venice alohan'ny hampijanonana ny lamasinina mankany amin'ny toerana manaraka anao.
Eran-tany fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Europe 7: Vienna
Eto isika mandao ny tena nandeha lalana sy ny loha kely niala tamin'ny lalana. Fa ny soa antony, anefa, toy ny hita kokoa afovoan-firenena Eoropeana tokony tsy ho odian-tsy hita. Ireo manana ny tsirony sy ny flair ny andrefana miaraka amin'ny fahasamihafana manaitra. In Vienne, midika izany fa misafoaka kafe kolontsaina ary vidin'ny vato ambany. Inona no mety kokoa tianao?
Fahazoan-dalana mankany isika, fara fahakeliny, indroa andro tao Vienna talohan'ny nifindrany tamin'ny.
Mijanòna 8: Prague
Ity tanàna arivo taona ity dia malaza amin'ny tanàna taloha. Rehefa mitsidika, aza adino ny hijanona amin'ny Momba ny Kintana Clock alohan'ny loha mba hahita an'i Jesosy zaza. Raha liana ianao teo amin'ny tantara, faritanàna voatokana ho Jiosy taloha dia mbola mitondra ny marika ao an-tery inhabitation. Na dia amin'izao fotoana izao ny faritra efa nohavaozina be, ianao dia mbola afaka mitsidika ny enina synagoga.
Manoro hevitra hijanona ao Prague izahay telo andro farafahakeliny mba hizaha ny tanàna.
Eran-tany fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Europe 9: Berlin
A testament ny fahaterahana indray, Berlin amin'izao fotoana izao dia ny foiben'ny kolontsaina alemà ny atodiakanga Izy. Na mikasa hitsidika ny tsipika hipster na iray ianao tranom-bakoka zavakanto Mody toy ny trano fisakafoanana tsara fisakafoana, Berlin no toerana tianao ny ho. Misy entana ny zavatra ho atao eto, anisan'izany ny fitsidihana ny sisa tavela ao amin'ny Berlin Wall. Mazava ho azy, misy ny tranom-bakoka sy ny lalan-tsara nentim-paharazana ihany koa.
Fahazoan-dalana mankany isika, fara fahakeliny, telo andro eto hankafy Berlin rehetra dia manana ny tolotra.
Mijanòna 10: Amsterdam
Ianao nahita lakandrano any Venice, fa na inona na inona afaka hanomana anareo ho amin'ny milamina, milamina tanànan'i Amsterdam. Ny Holandey no renivohitra an-trano ny sambo sy bisikileta, fa tsy fiara, ary afaka mora foana mandany ny fotoananao rehetra eto gawping amin'ny maritrano.
Manoro hevitra anao izahay mandehandeha any Amsterdam mandritra ny telo andro farafahakeliny koa, na dia Te manao tsaratsara kokoa miaraka amin'ny efatra na dimy.
Any no manana izany. Avy London an'i Amsterdam, ary na aiza na aiza ao amin'ny eo, izao no mpitari-dalana tsara indrindra ho an'ny fiaran-dalamby Eoropa lavitra beginners. in Amsterdam, afaka miverina any Londres ianao raha mampiasa Save A Train, an-trano na ny loha tsara sy Holandy.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “Ny fitsangatsanganana fiaran-dalamby any Eoropa farany ho an'ireo vao manomboka” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feurope-train-trip-beginners%2F%3Flang%3Dmg Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Ao amin'ny rohy manaraka ity, dia hahita ny làlana malaza indrindra fiaran-dalamby – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml, <- ity rohy ity dia ho an'ny teny Anglisy làlana fiantsonana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manolo ny es ho fr na tr sy ny fiteny maro hafa nofidinao.